“စန္ဒာမုနိ……ကုသိုလ်တော်……..ဓါတ်တော်တိုက်ပေါ်ကရူ့ခင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “စန္ဒာမုနိ……ကုသိုလ်တော်……..ဓါတ်တော်တိုက်ပေါ်ကရူ့ခင်း”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 28, 2011 in Local Guides, Photography | 10 comments
3 မန်းလေးတောင်အရှေဘက်ခြမ်းက မြင်ရတဲ့ရှမ်းရိုးမနဲ့ ရန်ကင်းတောင်
5 မှုံရီဝေ ၀ိုးတ၀ါးရှေးဟောင်းနန်းတော်နဲ့ ခေတ်သစ် ၂၅ထပ်မန်းမြန်မာပလာဇာ
6 မန်းလေးတောင်ခြေက ဟိုတယ် အရင်ကတော့ နိုဗိုတယ် အခုတော့ မန်းလေးရီဆော့
7 အပင်တွေကြားက စေတီဖြူဖြူ
8 သစ်ပင်တွေကြားက ရွှေစေတီ
10 အပင်ကြားကမြင်၇တာကလဲ အရသာတစ်မျုိးပါဘဲ
မန်းလေးတောင်ခြေနဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ အတုမရှိကျောင်းမှာ စွယ်တော်ကိန်းဝပ်တာကြောင့်ပါ။
စွယ်တော်ပြန်မကြွခင်ဥပုဒ်တစ်ရက်မှာတော့ မန်းလေးကျုံးပါတ်ပါတ်လည်က မြင်ကွင်းနဲ့
မန်းလေးတောင်ခြေရောက်တော့ အဲဒီမှာ ကိုယ့်နဲ့အလုပ်အတူလုပ်နေတဲ့ကောင်လေး
သူကိုတွေ့တော့ မန်းလေးတောင်ပေါ်ကနေပြီး စန္ဒာမုနိတို့ ကုသိုလ်တော်တို့ကို အပေါ်စီးကနေဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်ပေါ်လာပါတယ်။
စတက်တက်ခြင်းမှာတော့ စွယ်တော်တို်က် ဘုရားအဲဒီကနေဆက်တက်ရင်တော့
မန်းလေးတောင်ကို အဝေးကလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ အရင်ဆုံးမြင်ရတာကတော့
ထူးခြားတဲ့ အပေါက်အကြီးကြီးတွေရှိနေတဲ့ အဆောက်အဦပါဘဲ။
ဆောင်းဆိုတော့ ဂျာကင်အထူဝတ်လာတာမိတာလဲပါ ပါတယ်။
ဒါတောင် ရိုက်နေကျ ကင်နွန်က ဓါတ်ခဲကုန်သွားတော့ ဆမ်ဆောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတော့
ဘယ်တော့ မှ ဖြည့်လို့ မပြည့်နိုင်တဲ့ လူဆန္ဒဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်၊
လူတွေကို စိတ်ကြည်နူးစေမယ့် မြင်ရခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးနိုင်လို့ပါ။
မြင်ရခဲတယ်လို့ပြောရတာ အခုမန်းလေးတောင်တက်မယ်ဆိုရင် ကားလမ်းကတက်ချင်တက်။
ဒီစောင်းတန်းဘက်က လူပြတ်တော့ တက်သူသိပ်မရှိလိုပါဘဲ။
တကယ်တန်းပြောရရင် ဒီပုံလေးတွေက ရွှေကြက်ယက်မသွားခင်(18-12-2011)ကတည်းက
အဲတော့ပုံတွေဘဲ ဆက်တိုက်တင်ဖြစ်နေတာကိုတော့ သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြပါတော့နော်။
ဒါပေမယ့် ကိုပေါက်ကြောင့် အလွမ်းပြေ ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ …
အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းတောကို လွမ်းဒယ်..
ကိုပေါက် ရဲ့ ဒါပုံတွေ ကို အမည်မဖော်လိုသူ ငပေါက်ဖော် မှ တစ်ပုံလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သိန်းဖြင့် ဝယ်ယူရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရှိရသည် ။ ဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲ ဟု ဗျူးဖြစ်သောအခါ ၊ ယူအက်စ် မှ အူးကိုင် အား တစ်ပုံလျှင် ဒေါ်လာ ငါးထောင် ဖြင့် ပြန်ရောင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသွားခဲ့ပါသည် ။
လို့ ရေးထားတာကို အနီဝင်ပေးထားတော့
တကယ်လို့ရေးထားတဲ့အချက်အလက်အကြောင်းအရာကို မကျေနပ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် အကောင့်ဝင်ပြီး ကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာကိုယ်ဝင်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။
အခုဟာက အလကားနေရင်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လက်ဆော့ နေသလိုပါဘဲ။
အားပေးသွားပါတယ်လေးပေါက် ..အနီ ကိုလည်း ချေဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်..
2 တောင်တက်လမ်းတစ်နေရာကနေမြင်ရတဲ့စွယ်တော်တိုက် ကိုတော့ Facebookမှာ
မြင်ကတည်း က နှစ်သက် တာဖြစ်ပါကြောင်း…
ဦးပေါက်ရေ……… ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကတော့ ကုသိုလ်တော်ဘုရားမှာ မြက်ထိုးပွဲဆိုတာ ရှိတယ်၊ နန်းရှေ့က ရပ်ကွက်သူား တွေက တစ်နှစ်တစ်ခါ ကုသိုလ်တော်ဘုရားပွဲနီးရင် ဘုရားမှာ ရှိတဲ့မြက်ပင်တွေ၊ ခြုံတွေကို ရှင်းလင်းကြတာပေါ့၊ ကုသိုလ်ရှင်ကျွေးတဲ့ ထမင်းတွေကို အင်ဖက်တွေခင်းပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးစားကြတာ၊ မိန်းကလေးတွေက မြက်သယ်၊ ယောက်ျားလေးတွေက မြက်တွေ ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်လို့ စကြနောက်ကြနဲ့ ကျနော်တို့က အဲ့ဒီအချိန်က ကလေးအရွယ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဂူတွေကြားထဲ တူတူပုန်းတမ်း ကစားခဲ့ကြတာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေပေါ့၊ အခုတော့ ဘုရားမှာ ကျောက်ပြားတွေခင်းလိုက်တော့ အဲ့ဒီအလေ့အထလဲ မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်………….
အမှတ်တရအနေနဲ့ ပို့စ်လေးရေးတင်မယ်ဆိုရင် မှတ်တမ်းလေးဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါရဲ့။
မြက် တော့ ပြောမနေ နဲ့ တောင်ကွဲ စေတီ ရောက်တာ . ဘာမြက်ခင်း၊ ဘာမြေနီလမ်းမှ မရှိတော့ဘူး .အကုန် ကွန်ကရစ် တွေပဲ ဖြစ်ကုန်တာ… အတူပါတဲ့ ဆရာကြီးဆို တောက်တခေါက်ခေါက် နဲ့ ….. သဘာဝ တွေပျက်ကုန်တာ လေ .တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လဲ .. မိုးရွာရင် ဗွက်မထ ဘူးပေါ့ ……